Uma - umnikazi we abacaphuni futhi izinwele engalawuleki, kodwa iphupho iqonde futhi abushelelezi njengoba usilika, ukukhiqizwa kwe "Inoar yi-keratin" - ngawe! Ukulingisa ngokucophelela futhi ngobumnene, kuba qualitatively futhi unomphela kushintsha indlela yakho best! nokuphepha okugcwele eliphezulu kakhulu izithako zemvelo aqinisekisiwe!
Njengoba konke lokhu sidalwe?
Intombazanyana waseBrazil - uManoel Inocencio Kuye kwaba impumuzo ngezigidi abesifazane abaphethwe nobuthakathaka evukela nezinwele, kanye wavakashela amathiphu. Ngokokuqala ngqá wavula salon ezikude 1974, ke ngokushesha lwehla uvalo ngokwanele nedumela ezweni lakubo, usebenzisa izinga okusezingeni kuphela izithako zemvelo. Kodwa lona wesifazane wayengenayo kume lapho.
Kakade emva kweminyaka 17 Inocencio izimonyo professional umugqa wethulwa "Inoar yi-keratin". Ngesikhathi esifanayo imikhiqizo yayo ziye sasakazekela imingcele Brazil, ke wazuza udumo ngamazwe ngempela futhi ibe yimpumelelo enkulu nezigidi wobulili bubuhle. Siyini isizathu ngoba ukusabela ngaleyo ndlela? Njengoba waphawula yizigidi abasebenzisi umugqa olunje, konke izimonyo zisetshenziswa ephephile kuphela, kodwa ikhwalithi yesikhathi eside nemiphumela yezingxenye, athwala hhayi kuphela qondanisa kodwa izinwele nokubuyiselwa.
Njengamanje Inoar Professional brand uye baphumelele okukhulu: it is kufakwe 10 abakhiqizi phezulu Brazilian izimonyo, kanye zidayiswa emazweni angaphezu kuka-20 kulo lonke elase-izwekazi emhlabeni.
Izikhombisi eyinhloko inkampani "Inoar"
Wawuyini umgomo wazo oyinhloko emsebenzini yayo abakhiqizi 'Inoar "cabanga ukukhiqizwa izimonyo, okuyinto ephelele isikhathi eside ukuze izinwele waqonda. Ngenxa yale njongo ayesebenzisa yi-keratin uketshezi - iprotheni zemvelo ezitholakala hairline lomuntu ngamunye.
Ngaphezu kwalokho, libuye lisetshenziswe amafutha yemvelo has imiphumela ezuzisayo ubuqotho isakhiwo izinwele kanye nekunciphisa emiphumeleni elimazayo izingxenye ezengeziwe. Ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo "Inoar yi-keratin" kungenzeka kokubili ngokoMthetho professional ubuhle nokucwala ekhaya - kule amanga ubunjalo wonke lo mugqa izimonyo.
An plus ezengeziwe libuyekeza Inoar uqaphela la maphuzu alandelayo:
umthelela ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Kanye Ehlala, kuthinta yokutakula kanye nenguquko isakhiwo izinwele ubude bayo.
Revalina s temat yezingxenye esetshenziswa. Anamandla magic ithonya siguqule posechennye futhi izinwele obuntofontofo ezinhle, izinwele shiny.
Isikhathi senzo. Ngokungafani efanayo "Inoar yi-keratin" kusho lowo oyibamba kusukela kwamahora ambalwa izinsuku ezingu-7, le izimonyo ongasindisa umphumela ezidingekile ngenyanga.
Futhi konke lokhu, abakhiqizi esesikwenzile sibonga ucwaningo eziningi kanye nolwazi labs professional "Inoar".
Izinzuzo usebenzisa "Inoar"
Uma beqhathaniswa ukubukwa okwenziwa abantu abavamile, isicelo izimonyo Inoar Professional, yi-keratin "Inoar" Izibuyekezo okuyinhloko ubuhle salon uthola oluphelele futhi okuningiliziwe. Ngakho, zingabantu izinzuzo ezilandelayo kwesicelo komugqa yezimonyo:
ayinangozi ngokugcwele ukuyisebenzisa. Ngokwesibonelo, phawula ephelele ukuphepha ochwepheshe ukusetshenziswa kwezimali: abawona ezonakalisayo ukuze isikhumba izandla noma ikhanda, futhi angasetshenziswa ukuze eqondisa noma ukuvuselelwa ngokushesha ngemva Perm noma izinwele Umbala.
Nobuchwepheshe bale onjiniyela kanye nenani elikhulu ezenzekayo. Kuyo yonke le ndawo yayikhona, ukukhiqizwa kwanoma izimonyo azikaze bavunyelwe abantu abangahlakaniphile neze chemistry biology. Kwabo bonke abasebenzi efaneleyo, ube imfundo ephakeme futhi agcwele imibono eminingi on ukuthuthukisa kwemikhiqizo yekhwalithi ephezulu izinwele ukunakekelwa.
Lula ukusetshenziswa. Njengoba izakhamuzi evamile, inkosi waphawula ukuthi ukwenza izinwele nokubuyiselwa kungaba nobuhle izinwele salon, futhi ekhaya. Kuyinto ngokwanele ukubona ividiyo olusemthethweni noma ufunde imiyalelo on the isembozo.
ngemali ephansi. Ngokungafani nezinye abakhiqizi izimonyo izinwele Ehlala kanye nokubuyiselwa Inoar developers ' "akusho yokugcizelela intengo. Zenza konke ukuze bathenge imikhiqizo yabo, futhi umuntu osesilinganisweni emgwaqweni ayengakwenza. Ngokwesibonelo, ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo ngu Inoar aqede izinqubo ezengeziwe - lo mugqa usuthathe indawo ngempumelelo uhla egcwele services izinwele ukunakekelwa.
Ohlukile ukwakheka "Inoar"
Njengoba waqala ukukhula kwawo ngo-1991, umugqa ukukhiqizwa kokwenza izinwele yi-keratin eqondisa (Inoar), wakha uhlu omkhulu amathuluzi isetshenzisiwe imvelo professional kanye ekhaya ngempumelelo. Nokho, akagcini lapho, Ngokuqhubeka sokujabulisa abalandeli ezintsha kokuba eliphezulu, ephumelelayo futhi amathonya yesimanje.
Ngakho, enye impumelelo zakamuva elabhorethri professional angabhekwa inkampani ye super-isakhiwo se-Ehlala yi-keratin - Amandla Powder. I-derivatives main kubhekwa ingxenye eyingqayizivele lapho nhlobo formaldehyde -Substance kokuba nephunga edabukisayo. Lokhu Ukwakheka has izinzuzo ezilandelayo:
Ukukhishwa ephelele igesi kungenambala.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela iphunga intuthu.
Ayikho ukulinyazwa izimpande futhi izinwele isakhiwo.
Amandla Powder - lena revolution real emsebenzini wokukhiqiza izimonyo!
Uma ufisa ukuthola i-imeyili evela enkampanini Inoar test isethi, kufanele wazi ukuthi kukhona izinhlobo ezilandelayo: insiza for ukunakekelwa izinwele futhi Ehlala:
G-Hair yi-keratin. It ukhonza njengendlela eyinhloko futhi ethandwa kakhulu ejenti yezimonyo kusukela wonke ulayini "Inoar". Kuyinto lonke iqoqo: buso, imoto nomthelela kuphumelele ngokufanayo ku ezisontekile noma indawo. Iqukethe uwoyela argon futhi shea.
izinwele yi-keratin Moroccan (imoto yokuhlanza kanye nokusungulwa ukusebenza). Lesi sakhiwo kufaka imoto ukusetshenziswa nsuku zonke futhi namafutha-conditioner. Liqukethe izingxenye ezifana yi-keratin, umbala omhlophe ubumba, husks ubhontshisi kanye argon. isicelo sayo unika amabhonasi ezifana:
kwedivayisi Perfect nazo zonke izinhlobo izinwele.
Ubude yi kokuqala.
The kungenzeka okwenza impatho okugeza ngokushesha ngemva kokwelashwa.
Quickness sifinyelele nomphumela omuhle.
Moroccan ungafaka isicelo kwi yi-keratin izinwele nge ntshashintshe ngokunganaki.
Apple Jelly yi-keratin. Lokhu ikhithi iqukethe uhla efanayo nakwezinye izinhlobo zezinto eziphilayo. Nokho, umehluko oyinhloko kusukela abanye wukuthi Apple Jelly yi-keratin yenziwa kuphela kusuka izithako zemvelo - ngaphandle kobukhona iyiphi amakhemikhali. "Inoar" izinwele ngokuqukethwe apula kanye izithelo acid ilungele izinwele owomile futhi obuntofontofo zamantombazane nabesifazane abadala, kanye nabesifazane abakhulelwe. Unawo izinzuzo ezilandelayo:
Kuyahambisana ngokugcwele yiluphi uhlobo ukungenela izinwele.
Kuphephile ngisho namantombazane abaneminyaka engu-13.
Ingasetshenziselwa kusimo, futhi omama abasebasha.
It has a nephunga elimnandi.
Sebenzisa "Apple Jelly yi-keratin" kungcono kakhulu ngesikhathi zezinkinga beriberi noma ezincane ne izinwele.
Brazilian Afro yi-keratin. Igama lalesi eziyinkimbinkimbi kucacile: uklanyelwe ezisontekile kakhulu, kanye nokuvuselelwa yabo futhi Ehlala. Brazilian Inxanxathela ikhuthaza ukuthambisa, amafutha nokunakekela mnene senkinga isakhiwo izinwele. Ngo womshini le izingxenye zemvelo eziyinkimbinkimbi esetshenziswa, athambekele phakathi elingenhla kwamangqamuzana esikhumba. izimali Plus:
Iyahambisana izinwele uhlobo Afrika nase-Asia.
Ngadlula nezinto eziningi ezivivinya laboratory kanye iphephile ngokuphelele ukusetshenziswa.
Incazelo eningiliziwe G-Hair yi-keratin
Njengoba kushiwo ngenhla, G-Hair yi-keratin - lena eziyinkimbinkimbi main emgqeni kwemikhiqizo izinwele ukunakekelwa. Unawo izinzuzo ezilandelayo:
Qualitatively elungisa ezisontekile emva isicelo sokuqala.
It ikuvumela ukuba ngokushesha futhi ngokunembile enze ukutayela izinwele.
Ngesikhathi esifanayo, yi-keratin "Inoar" okuyinto intengo kumthengisi esemthethweni eRussia zokhahlamba kusuka ruble 1,000 ukuze 15,000 ngoba izindlela ezihlukahlukene, anezakhi ethize:
Yena elungisa iyiphi izinwele esihle - okokuqala futhi emva kokufinyelela izinyanga 4-5. Ngokusetshenziswa G-Hair yi-keratin izinwele akusho ukoma imvula noma ngemva eshaweni. Ngaphezu kwalokho, musa uthole bedidekile ngokuhlala iqonde futhi bushelelezi izinyanga 3.
G-Hair yi-keratin has a Ukwakheka esiyingqayizivele. Ngakho, iqukethe Kusizuzisa on izinwele isakhiwo uwoyela argon, shea ibhotela lawomandla okuphulukisa, umsungulo futhi glycerol uqobo yi-keratin. Lezi zingxenye ukusiza ukuthuthukisa ukuminyana futhi kuthuthukise bucwebezele okungokwemvelo lapho izinwele.
Ohlukile "Inoar" wukuthi kuba ngokuphelele uthatha indawo yabo bonke izindlela kwemikhiqizo izinwele ukunakekelwa.
Imigomo ukusetshenziswa G-Hair yi-keratin
iphakethe ngalinye equkethe yi-keratin "Inoar" yokusetshenziswa khona. Nokho, kuyasiza ukwazi izici inqubo, ikakhulukazi ukulandelana nokuqaliswa kwalo:
Izinwele wageza ngamanzi afudumele whereupon they isicelo imoto ukuhlanzwa G-Hair Deep Ukuhlanza Shampoo. Kunenkolelo imizuzu 3, bese wageza ngokugcwele. Umshini wokomisa izinwele omisiwe ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi atholakalayo.
izingxenye engeziwe - Inqubekela Isixazululo - ixubene Ukwakheka okulungiselelwe G-Hair Extreme Premium yi-keratin ngesilinganiso 1 isipuni ingxenye futhi 10 - kwengoma. Lesi senzo wenziwa imizuzu 5-8 ngaphambi esinyathelweni esilandelayo.
Ithuluzi okuholela lisetshenzisiwe izinwele - kusukela occiput ukuze kakhulu ichopho, futhi yayingawuthinti sezinwele. Ngamazinyo encane nekama nge ngokweqile isusiwe. Ukwakheka kugcinwa for isigamu sehora lize egxile ngokuphelele ku umucu ngamunye.
Elingenamikhono is kahle omisiwe umshini wokomisa izinwele, kodwa nokusetshenziswa ikamu. Hairstyle ihlukaniswe yaba izingxenye 4, ngasinye sazo kusetshenzwe utjuzhkom izikhathi 8-9. Ehlala Kwenziwa kaningi amathempeli kanye bang.
Okubalulekile! Ukuze isimo ngasinye ekhanda kufanele kugcinwe amandla iyunithi yayo heater:
170 0 C. Luhle izinwele mncane futhi ibuthakathaka.
200 0 C. Isetshenziselwa lapho zihlatshwa evamile futhi wadalula ukuthi izinwele ukudaya.
220 0 C. I degree of Ukushisa ilungele izinwele indawo.
Izinwele touch-iphathwa akunconyelwe imizuzu 10-12. Ngokusho kwabo ngemva izinwele is wageza ngamanzi afudumele, bese sisebenzise imaskhi G-Hair Kuyaqedelwa. It is igcinwa kwi izinwele imizuzu engu 9, bese wageza ngokucophelela off. Kwekhanda hairdryer omisiwe.
Ngubani okumele asebenzise Ehlala yi-keratin we G-Hair yi-keratin?
Ukuphumelela G-Hair yi-keratin wazibonakalisa, kodwa kukhona Izimo eziningana lapho Ukwakheka yi-keratin "Inoar" kuvela ukuthi enonya. Lezi zihlanganisa:
Inkathi isimo ekhethekile nabancelisayo.
Ukuba khona komzimba.
Ungayisebenzisi G-Hair yi-keratin intsha.
Kanjani hhayi ukuba bakopele ngokwakho lapho ekhetha izimali bangempela
Yi-keratin eqondisa "Inoar" - inqubo ethandwa kakhulu okwamanje. Kwenziwe hhayi kuphela nokucwala ubuhle, kodwa futhi endaweni ekhaya, sesiye kufinyeleleke izigidi zabasebenzisi. Demand kudala ukuthengisela, futhi ngenxa yalokho amawebusayithi enkulu baba bakamalalahlengezela ahlinzekwa inkohliso. kanjani thola phakathi kwabo imikhiqizo bangempela kanye izinga? Kukhona amanye amathiphu:
"Inoar" Ukuthola kufanele sigcwaliswe kuphela kumawebhusayithi ezisemthethweni.
Izindleko akufanele kube eliphansi kakhulu noma liphezulu kakhulu.
Akekho izimali azithengiswa yi ingilazi. imikhiqizo enjalo ngokushesha ezihlobene mbumbulu.
Kube kufanele ngokomthetho kuqinisekiswa izitifiketi ukuvumela ukuthengiswa kwemikhiqizo.
Ukusetshenziswa kwalezi amathiphu ku umkhuba kuzovumela esiphezulu kufanele uzivikele kanjani wena izinwele zakho kusuka emiphumeleni elimazayo yemali yomgunyathi.
Inoar Professional - ulayini elite ukugcoba yilowo nalowo owesifazane osuke self-ukuhlonipha. isicelo sayo kuzovumela izinwele zakho ukuze uthole ukuphila yesibili, nokuphepha ngokuphelele - musa ilimaze kwesikhumba ekhanda noma impilo yabo.
Ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo "Inoar yi-keratin" kungenzeka kokubili ngokoMthetho professional ubuhle nokucwala ekhaya. Kuzo zonke izimonyo zisetshenziswa ephephile kuphela, kodwa eliphezulu futhi yesikhathi eside nemiphumela yezingxenye, okuyinto bathwale hhayi kuphela qondanisa kodwa izinwele nokubuyiselwa. "Inoar" - Ngokuzayo izimonyo, ephezulu is ngokucophelela bese zihlolisiswa ngochwepheshe laboratories ezikhethekile.
Magnificent ukwakhiwa onguchwepheshe izinwele "Inoar" - kuyinto:
kuze kube nini nanini ukusebenza waqonda imicu, olubushelelezi ephelele;
nokubuyiselwa izinwele ezilimele ezingeni yamangqamuzana;
ukwelashwa olunzulu futhi ukukhanya imicu, ahlelembe phezu kwawo wonke obuphelele curls;
ukudla okusheshayo futhi amafutha izinwele.
Futhi, izinkulungwane nhla ngentshiseko bencoma maqondana nezinwele ezinde. Akunakusetshenziswa akudingeki ayeke ubumnandi sibe bahle noma ngaphezulu!
Owesilisa Ikani nesilevu ukukhula bristles: Izibuyekezo
Chocolate iwayini ekhaya: iresiphi